Maitiro ekuona terevhizheni paApple TV yako neIPTV | IPhone nhau
Maitiro ekuona terevhizheni paApple TV yako neIPTV
Miguel Hernandez | | Apple tv, iPhone, Apple zvigadzirwa, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo Apple TV inova inoshamisa nzvimbo yemultimedia pese pawakakwanisa kuimisa nenzira kwayo. Nekudaro, ichine poindi isina kusimba, iyo nyaya yekuti hatigone kutarisa DTT kana chinyakare terevhizheni chiteshi nekuti nekuda kweizvi isu tinofanirwa kushandisa mashandiro echiteshi chimwe nechimwe chiri kutaurwa.
Tichakudzidzisa maitiro ekuona DTT kana echinyakare terevhizheni chiteshi pane yako Apple TV kubva kune IPTV uye kugona kushandisa yako Apple TV kune zvese. Nenzira iyi unogona kukanganwa zvachose nezvekushandisa kweterevhizheni yega yega uye nekuronga zvemukati zvakananga paApple TV.
Chinhu chekutanga chatichazoda ndeye IPTV application, Tichaona kuti kune akawanda muIOS App Store yeTVOS, zvisinei, ndinokuunzira mazano angu maviri, ayo anowirirana zvizere kune ese ari maviri iOS uye tvOS uye iPadOS, ndokuti, yepasirese.
GSE IPTV: Ichi ndicho chishandiso chandasarudza, chine "premium" vhezheni yemubhadharo mumwechete unosvika mashanu euros. Iyo yekushandisa interface haisi iyo yakanyanya kujekesa pasirese, asi inoshanda sekirivheri.
Nzizi dzeTV: Iyi app inobva kuna Tiago Martinho, iye mugadziri weReplica. Iyo ine yakachena kwazvo uye yakanyatsogadzirwa mushandisi interface, saka isu tinoikurudzira zvakare zvakare.
Iye zvino tine iyo IPTV application, saka isu tinofanirwa kutsvaga IPTV runyorwa rwuri muM3U fomati. Ichokwadi kuti IPTV inowanzo shandiswa ku "hack" zvemukati. Kubva kuActualidad iPhone tinoshora chiitiko ichi uye tinokurudzira kuti iwe ushandise icho chete kuwana yeruzhinji terevhizheni kana iyo inotepfenyurwa pachena.
Chinyorwa cheDTT chiteshi mune yemahara IPTV.
Isu tatova nezvinhu zviviri zvakakosha, zvinova zvinoshandiswa IPTV uye neiyo IPTV runyorwa, saka ikozvino yave nguva yekuzviisa.
Isa uye gadzirisa IPTV runyorwa paApple TV
Iye zvino tave kungo teedzera iyo M3U zvinyorwa ine chinongedzo chayo pane yedu iPhone kana iPad yatinozoshandisa seye Apple TV keyboard. Tichaenda ku «Wedzera zvinyorwa zviri kure» uye mubhokisi rekutanga isu tinopa zita kwariri, mune rinotevera tichaisa chinongedzo uye tinongobaya on «wedzera» uye isu tichava neyedu runyorwa rwezviteshi.
Kuti tigozvigadzirisa isu tichaita zvinotevera:
Wedzera chiteshi chaunoda kufarira
Enda kuchikamu chevanofarira uye sarudza "edit" pane chiteshi
Paunenge uchinge uri mukati, ipa chiteshi nhamba ine nguva uye zita rechiteshi seizvi: «1. ***** »
Iye zvino muchikamu chekumusoro chekuruboshwe sarudza kugadzirisa makwara nenzira yekuverenga
Rongedza chiteshi chaunofarira zvakare uye chigoisa iyo icon yaunoda, kuti uite izvi, ingo tsvaga iyo icon muGoogle Mifananidzo muPNG fomati uye kuteedzera / kunama kero iri mubhokisi
Sevha iyo yekugadzirisa
Neiyi nzira yakapusa iwe unogona kugadzirisa yako chiteshi uye nekukurumidza kuwana iwo. Kana iwe uine chero mibvunzo, tinokuyeuchidza kuti kumusoro iwe une vhidhiyo yemabatiro ekugadzirisa uye kuwedzera yako IPTV chiteshi kuApple TV uye uteedzere mirairo nhanho nhanho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro ekuona terevhizheni paApple TV yako neIPTV
Ndeipi iyo url yandinofanira kuwedzera? Iko M3U URL iripi?
MuIOS 14.5 basa "Tsvaga" rakawedzerwa muPowerbeats Pro
Iyo iPhone 13 inogona kuve nemodeli ine 1 TB yekuchengetedza